Kufamba hakuna kuzvimirira pane mafomu, asi mafomu haakwanise kuvapo pasina anofamba. — T.
Vol. 1 MAY, 1905. Nha. 8
MOTI ndiko kutaura kwekuziva.
Chinangwa chekufamba ndechekusimudza chinhu kune kuziva.
Kukurudzira kunoita kuti nyaya ifunge.
Pasina kufamba hapana panogona kushanduka.
Motion haigone kunzwisiswa nemweya wemuviri.
Motion ndiwo mutemo unodzora kufamba kwemiviri yese.
Kufamba kwemuviri ndizvo zvinangwa zvekufamba.
Zvese zvinongedzo zvine kwazvinobva mune imwe isina chikonzero, kufamba kusingaperi.
Hupenyu hunoratidzwa kuburikidza nekufamba, uye munhu anorarama uye anofamba uye anochengetwa ari mupenyu muVamwari - ino famba-munyama nepamweya. Iyo inofambisa iyo inonakidza kuburikidza nemuviri wemuviri, inochengetedza zvinhu zvese zvichifamba, uye inosimbisa maatomu ega ega kuti aite basa rayo mukuita chirongwa chakakodzera chekuratidzira.
Pane chinofamba chinoita kuti maatomu afambe. Pane chinofamba chinoita kuti vabatane pamwe chete kuti vaite semamorekuru. Iko kune kufamba kunotanga hutachiona hwehupenyu mukati, kuputsa iyo mamorekuru fomu uye kuwedzera uye kuivaka iyo kusvika mune yemiriwo cell chimiro. Pane chinofamba chinounganidza masero, chichivapa kumwe kutungamira uye vanochinjisa kuva nyama yematehwe uye nhengo. Pane mafambiro anoongorora, anoratidza, uye anosarudzira chinhu. Pane fambiro inorongazve, inofananidza, uye inobatanidza chinhu. Iko kune kufamba kunobatanidza uye kunogadzirisa zvinhu zvese munzvimbo yavo yakakura-chinhu.
Kuburikidza nenhanho nomwe nhoroondo yenzvimbo yechadenga, neyenyika, uye nezvevanhu, inodzokororwa uye yadzokororwazve nemweya wemunhu panguva yekutenderera kwemukati wemukati. Aya mafambiro anozviratidza: mukumuka kubva munguva yayo yekuzorora kudenga-nyika yemweya wemubereki; mukushandurwa kwenzvimbo dzenyaya painenge ichisangana nemafungu emanzwiro ehunhu uye nevabereki vanozopa muviri wayo; mukufambisa kwayo kuburikidza nemafambisirwo anodiwa pakuvakwa kwemuviri wayo; mukuzvarwa kwemuviri wenyama kupinda munyika ino uye nemukati mavo; mune tariro, kutya, kuda, kuvenga, kushuva, zvishuvo, uye kurwa nenyaya apo uri munyama uye nepasati pekufa kwemuviri wenyama; mukumiswa kwemuviri wemuviri parufu uye kupfuura nepasireral nyika; uye mukudzoka kuzorora mune zvekupfeka zve mweya wemubereki-kunze kwekunge zvanga zvazvisunungura kubva kunongedzo nokuzadzisa mitemo yavo uye nekuisa, nguva dzese, kuvimba kwakazara uye kwakazara mukuziva pamusoro pezvinhu zvese.
Nongedzo nomwe mune imwe homogeneness yakakosha midzi-chinhu inokonzeresa kuoneka nekutsakatika kwezvinhu zvakasikwa, nyika, nevarume. Kuburikidza nenhaurwa nomwe kuratidzwa kwese kuve nekutanga uye nekuguma, kubva pane zvemweya zvakanyanya pane yakadzika arc yedenderedzwa kusvika kumhando dzakasarudzika dzemhando, zvobva zvadzokera pane yakakwira arc yekutenderera kwayo kusvika kuhungwaru hwepamweya. Izvi zvinomwe zvinongedzo ndeizvi: kuzvifambisa, kufambisa-svetuka, kugadzirwa kwekufamba, centrifugal danho, kusimuka kwemaitiro, centripetal motion, analytic kufamba. Aya mafambiro anoshanda mukati uye kuburikidza nemunhu, saizvozvo zvakare, pamwero wakakura, ivo vanoshanda mukati uye kuburikidza nokudenga. Asi isu hatikwanise kunzwisisa mashandisiro azvose kusvikira isu tatanga kuona nekukoshesa kuita kwavo uye nehukama hwekudaidzwa kunzi murume.
Kuzvifambisa ndiko kungogara kuripo kwekuziva mukati mezvinhu zvese. Icho chinhu chisinganzwisisike, chisingaperi, chiri pasi, chinokonzeresa chikonzero chekuratidzwa. Kuzvifambisa ndiko kufamba kunozvifambisa uye kunopa iko kukurudzira kune zvimwe zvinangwa. Iyo ndiyo nzvimbo yezvimwe zvese zvinongedzo, inovabata muchiyero, uye ndiko kutaura kwepamusoro kwekuziva kuburikidza nenyaya uye nezvinhu. Kana ari munhu, nzvimbo yekuzvimisa yega iri kumusoro kwemusoro. Munda wayo wekuita uri pamusoro uye mune yepamusoro hafu yemuviri.
Yenyika Yose Motion ndiko kufambisa kunoonekwa kune vasina kuratidzirwa kunoratidzwa. Iko kufamba kunoshandura chinhu kuita mweya-chinhu uye mweya-chinhu kuita chinhu. Kana ari murume, pakati payo kunze uye pamusoro pemuviri, asi mafambiro anobata pamusoro wemusoro.
Synthetic Motion iyo archetypal kana yakakodzera kufamba nayo uko zvinhu zvese zvine hukama. Uku kufambisa kunonakidza magadzirirwo uye kunopa kutungamira kwenyaya mumisangano yayo, uye zvakare kunoronga zvinhu mukuita kwekuita kwayo. Pakati pekufamba kwekufamba hakusi mumuviri, asi mafambiro anoshanda kuburikidza nerudyi chikamu chekumusoro kwemusoro uye kuruoko rwerudyi.
Centrifugal Motion inotyaira zvinhu zvese kubva pakati payo kusvika painotenderera mukati mechikamu chekuita. Iyo inomutsa uye inomanikidza zvese zvinoshandiswa kukura nekuwedzera. Pakati pe centrifugal yekufamba ndiyo ruoko rworudyi. Iyo munda wekuita kwayo mumuviri wemunhu iri kuburikidza nerutivi rwerudyi rwemusoro uye nechitanda chemuviri nechikamu cherutivi rworuboshwe, mukuchepa kudiki kubva kumusoro kwemusoro kusvika pakati pakati pehudyu.
Kunofambisa Motion inochengetedza fomu nekuvharirwa kwechinguva nekuenzanisa kwemasentimita uye centripetal. Uku kufambisa kunobata munzvimbo yemasium kana muviri unosanganiswa nezvinhu. Seharare yechiedza ichipinda mukamuri rakasviba inopa chimiro kune zvakawanda zvezvinhu zvisingaonekwi, asi zvinotora pakuonekwa pavanopfuura nepamigumo yeiyo ray, saka zviyero zvekufamba zvinomira uye zvinoita kuti zviratidzike kuratidzika kwekufambidzana kwecentrifugal uye centripetal. mafambiro ari mune yakajeka fomu, uye anoronga atomu yega yega maererano neyakagadziridzwa yakaitwa pairi nekuumbwa kwekufamba. Kana ari munhu, nzvimbo yekumira yakasimba ndiyo nzvimbo yepakati yemuviri wakasimba uye munda wayo wekushanda uri mukati uye unotenderera muviri wese.
Centripetal Motion inokwevera zvinhu zvese kubva mudenderedzwa kusvika pakati payo pachiitiko chekuita. Inogona kubvumirana, kupaza, uye kutora zvinhu zvese zvinouya mukati mechikamu chayo, asi ichizorodzwa necentrifugal uye inoyerwa nemirairo inomira. Pakati pe centripetal yekufamba ndiyo ruoko rworuboshwe. Iyo munda wekuita kwayo mumuviri uri kuburikidza nerutivi rworuboshwe rwemusoro uye mutsara wemuviri uye chikamu cherutivi rworudyi, mune yakatsetseka zvishoma kubva kumusoro kwemusoro kusvika pakati pakati pehudyu.
Ongorora Motion chinopinda, chiongorora, uye chinotarisa chinhu. Iyo inopa kuzivikanwa kune chinhu, uye humwe hunhu kuti huite. Pakati peanorytic kufamba hakusi mumuviri, asi mafambiro anoita kuburikidza neruboshwe chikamu chekumusoro kwemusoro uye kuruboshwe.
Kufamba kwega kunoita kuti kufamba kwepasi rese kuchinje undifferentiated chinhu mune mweya-chinhu, uye yekuzvifambisa inokonzeresa mafambiro ekugadzira kuti ipe kutungamira uye kurongedza zvinoenderana nehurongwa hwepasi rose, uye ndeyekufamba kwega kunoitazve centrifugal uye zvimwe zvese zvinongedzo mukati. nguva yavo vanoita mabasa avo akasiyana uye akakosha.
Imwe neimwe yekufambisa inongove mukuita kwayo, asi kufamba kwega kwega kunobata mweya uri mukati mayo chero bedzi Glamor yayo ichikunda, uye ichagadzira zvinyowani zvitsva muketani inosunga mweya kune vhiri rekuzvarwa patsva. Mufambiro chete uyo unosunungura mweya kubva pawiricheya yekuzvarwa patsva ndiko kufamba kwega, kwehuMwari. Wehunyanzvi, hwekufamba-famba, inzira yekusunungurwa, nzira yekuramba, uye yekupedzisira apotheosis-Kuziva.